ဘာကြောင့် ဆောင်းတွင်းမှာမှ ချောင်းဆိုးတာ ပိုအဖြစ်များတာလဲ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 24/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဆောင်းလေး အေးအေး ချောင်းလေး ဟွတ်ဟွတ် ဖြစ်နေပြီလား …….. နေပူရင် အပူချောင်းဆိုးတယ်ဆိုပေမယ့် ဆောင်းအေးရင် ရင်ကြပ်ပြီး ချောင်းဆိုးတာက ပိုဖြစ်သလို ပိုပြီးလည်း ပြင်းထန်သလိုပဲနော်။ ဘာကြောင့် ဆောင်းတွင်းမှာမှ ချောင်းဆိုးတာ ပိုအဖြစ်များတာလဲ လို့များ တွေးနေပြီလား …… ဒါဆိုရင်တော့ တွေးမနေတော့ဘဲနဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
ဘာကြောင့် ဆောင်းတွင်းမှာမှ ချောင်းဆိုးတာ ပိုအဖြစ်များတာလဲ။
တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ အအေးမိ ဖျားနာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းတွင်းကာလမှာတော့ အအေးမိ ဖျားနာတာ၊ ချောင်းဆိုးတာတွေက သိသိသာသာကို ဖြစ်တာပါတယ်။ လူတော်တော်များများ ယူဆထားတာက ဒီလို ဖြစ်ရတာဟာ ဆောင်းတွင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ပိုပြီး သန်မာလာလို့ ပိုကူးစက်လွယ်လို့လို့ပေါ့။ တကယ်ကတော့ ဒီယူဆချက်က အပြည့်အ​ဝ မှန်တယ်လို့ မယူဆနိုင်ပါဘူး။
အအေးမိ ဖျားနာတာ၊ ချောင်းဆိုးတာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက ရာသီဥတု အေးတာကြောင့်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းမှာ အပူချိန် ကျဆင်းလာတာ၊ အချိန် တော်တော်များများကို အလုံပိတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ကုန်ဆုံးတာ ဥပမာ -ကျောင်းတွေ၊ ရုံးခန်းတွေ နဲ့ အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အဆောက်အဦးတွေထဲမှာ ကုန်ဆုံးချိန်များလာတာ၊ မိုးလို စိုစွတ်မနေတာကြောင့် လူစုလူဝေးတွေ လုပ်ကြတာ၊ ပွင့်လင်းရာသီဆိုပြီး ပွဲလမ်းသဘင်တွေ သွားလာကြတာ များတာကြောင့်လည်း ရောဂါပိုးတွေက တစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်လာတာပါ။
ဆောင်းတွင်းမှာ လေထုက အေးမြခြောက်သွေ့တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိုထိုင်းဆ နည်းနေတာ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ ပန်းဝတ်မှုန်တွေ ပြန့်နှံ့နေတာ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက စိုထိုင်းဆ နည်းနေတဲ့ လေထုထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက ပုံမှန်ထက် အချိန်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်တာတွေကြောင့်လည်း ဆောင်းတွင်းမှာ အအေးမိတာ ချောင်းဆိုးတာတွေ ပိုအဖြစ်များတာပါ။
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း တလျှောက်က အမြှေးပါးတွေ ခြောက်သွေ့နေတာလည်း အအေးမိဖျားနာစေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်စေနိုင်ပြီး နွေရာသီကာလတွေထက် ချောင်းဆိုးတာကို ပိုဖြစ်စေတာပါ။
နောက်တစ်ချက်က ဆောင်းတွင်းမှာ ချောင်းဆိုးတာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ flu ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း ကူးစက်မှု မြင့်တဲ့အချိန် ဖြစ်တာကြောင့် ဆောင်းတွင်းမှာ ချောင်းဆိုးတာ အဖြစ်များရတာပါ။
ဆောင်းတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုးတာကို သက်သာစေဖို့
ဆောင်းတွင်းမှာ ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးတာ အဖြစ်များရတာလဲဆိုတာကို ပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆောင်းတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုးတာကို သက်သာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ ချောင်းဆိုးရတာက ကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်နည်းနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းအေးတဲ့အခါ လည်ချောင်းတလျှောက်က ဆဲလ်တွေက ခြောက်သွေ့နေပေမယ့် ရာသီဥတုအေးတာကြောင့် ရေမဆာဘဲ မသောက်မိရာကနေ ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချောင်းဆိုးလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး ရေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ သောက်ပေးပါ။
ရေအေးအေးကို မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရေနွေးနွေးလေးကို သောက်ပေးပါ။
ဆောင်းအေးအေးမှာ ခံစားရတဲ့ အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေကြောင့် ချောင်းဆိုးတာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် နေ့စဉ် စားသုံးမှုကို အာဟာရ မျှတအောင် စားသုံးဖို့ လိုပါမယ်။ ပရိုတင်း ပြည့်ဝအောင် စားဖို့ လိုသလို၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေ ပါဝင်အောင် စားသုံးပေးပါ။
လူစုလူဝေးတွေ များတဲ့နေရာကို သွားတာက အအေးမိ ချောင်းဆိုးတာကို ဖြစ်နိုင်ခြေ များစေပါတယ်။ ဒီလို သွားတာက ချောင်းဆိုးတာ ခံစားရနိုင်ခြေ များစေတာကြောင့် လူစုလူဝေးကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။
အပြင်က ပြန်လာတိုင်း၊ တစ်ခုခုကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ပြီးတိုင်း လက်ဆေးတာကလည်း ချောင်းဆိုးတာကို တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆားရည်နဲ့ အာလုတ်ကျင်းတာကလည်း ချောင်းဆိုးတာကို ကာကွယ်ဖို့ရော သက်သာစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
ချောင်းဆိုးလာပြီဆိုရင် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ ချွဲထရင် ချွဲပျော်ဆေး ( ဆေးညွှန်းမလိုဘဲ သောက်လို့ရမယ့်) တစ်မျိုးမျိုးကို သောက်သုံးပေးတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ်ပါပဲ။
ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ပါ။
အပြင်သွားတဲ့အခါတိုင်း ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ပေးတာကလည်း ဆောင်းအေးအေးမှာ ချောင်းဆိုးတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို အအေးမိ တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဆောင်းတွင်းမှာမှ ချောင်းဆိုးတာ ပိုအဖြစ်များတာလဲ ဆိုတာကို သိရှိပြီး ဖြစ်သလို ကာကွယ်ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်း သိရှိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကဲ …. ဆောင်းအေးအေးမှာ ချောင်းဆိုးမှုတွေ ကင်းစင်စေဖို့ ကာကွယ်လိုက်ရအောင်လား။
Can’t Stop Hacking? 8 Reasons You Can’t Get Rid of Your Winter Cough https://www.thehealthy.com/cold-flu/winter-cough-wont-go-away/ Accessed Date 11 January 2022
Winter Coughs and Colds https://www.towcestermedicalcentre.co.uk/self-help/winter-coughs-and-colds/ Accessed Date 11 January 2022
Beating the Dreaded Winter Cough https://www.weldricks.co.uk/news/beating-the-dreaded-winter-cough Accessed Date 11 January 2022